Entsha - Sun wancamisa elwandle - I-Airbnb
Entsha - Sun wancamisa elwandle
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRachel
Ukuphupha ukuva isandi solwandle ngelixa usela ikofu yakho yasekuseni, ukuhamba ngemizuzu emi-5 ukuya elunxwemeni ukuntywila iinyawo zakho okanye uhambe uhambo kwiindunduma zesanti kwiikhilomitha emantla nasezantsi ukuya kutshona kwelanga kunxweme olusentshona. Amagumbi okulala amathathu asandula ukuhonjiswa ukuze akwamkele kusapho lwakho lokubaleka elwandle okanye ikhefu elincinci kunye namaqabane. Isikhululo seWaffle kunye nekofu ye-Artesian ibandakanyiwe ukwenza isiqalo esigqibeleleyo kusuku ngalunye okanye ugqithele kwi-cafe okanye kwindawo yokutyela engaphantsi komzuzu omnye wokuhamba okanye indawo yokubhaka/4square nayo imizuzwana kude.
*Ukuqaphela ukuba ukurhoxiswa komzuzu wokugqibela kungenxa yezithintelo ze-NZ COVID zenqanaba lesi-3 okanye lesi-4 elithetha ukuba awusakwazi ukuhamba, ndonwabile ukubuyisela imali ngokupheleleyo kude kube lusuku lokuhamba.
UNewley walungisa ibhetshi yee-1940s ngesitayile se-surf elwandle i-boho yangaphakathi yee-pastel ezicocekileyo ezicocekileyo zokuphumza ingqondo nomphefumlo wakho.
Zonke iibhedi ezintsha kraca kunye nelinen kobo busuku bumnandi zilala ngoomatrasi wedeluxe wenkumbulo yedeluxe kwigumbi lokulala elikhulu kunye noluhlu lwemiqamelo yesitayile ukulungiselela yonke into ekhethwayo kunye namaphepha aphezulu wokubala. (Ilinen kunye nesidlo sakusasa kunye nesikhululo se-waffle sibandakanyiwe kwixabiso)
Isifudumezi-mlilo sombane esihlala kwindawo epholileyo ngeengokuhlwa zasebusika. Iyadi enkulu yangasemva yemidlalo elangeni. Uluhlu olukhulu lwemidlalo yebhodi okanye iNetflix kwi-smart tv ngezo ntsuku zemvula.
Indawo yedesika yokusebenza ukude ngesantya esiphezulu se-wifi esilungele iifowuni zevidiyo ukwandisa elo khefu elincinci okanye ukonwabisa abantwana.
Igumbi lokuhlambela elitsha elinentloko yeshawa ephindwe kabini / intloko ebheqayo elungelelanisiweyo ukuya kwishawari encinci. Iimveliso ze-Eco store bathroom.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo nge-dishwasher ukuze kungabikho xesha lilahlekileyo kwiholide yokuhlamba izitya! Unikezelo lwetanki yamanzi emvula amnandi amanzi okusela amnandi.
Iimveliso zevenkile ye-Eco ezisetyenziselwa ukucoca, ukugcina iikhemikhali ezirhabaxa kunye nokulungiselela ulusu olubuthathaka kunye ne-allergies. Imotto yenkunkuma encinci, ukuqokelelwa komgquba kunye nokuhlaziya kukhuthazwa.
Indlu yomthi kwigadi engaphambili ijonge phezulu phezu kwendlu ukuya elunxwemeni ukuze ufumane iwayini phezulu ukubukela ukutshona kwelanga okanye ukuhlola (ukusebenzisa ngomngcipheko wakho)
Indawo yokupaka ezitalatweni iimoto ezi-3 kunye nepropathi ebiyelwe ngokupheleleyo enamasango okhuseleko kunye noxolo lwengqondo
Imizuzu emi-5 uhamba uye kwiklabhu yokusindisa ubomi be-surf ukuze uqubhe ngokukhuselekileyo, imizuzu emi-3 uhambe uye kwindawo yokutyela yase-Ollies kunye nebha, ukuhamba ngomzuzu om-1 ukuya eCafe yaseBeach kunye nekofu enkulu kunye nendawo yokudlala, umzuzu om-1 ukuya kwi-Foursquare Supermarket eneepayi ezibhakiweyo zosapho, iipizza kunye nekofu. kufanelekile ukuhamba!
Isitulo esinamavili siyafikeleleka kwirempu ekungeneni ngasemva enokuthi isetyenziswe ukuba iyafuneka ndicela undazise kwangethuba ukuze sikwazi ukunceda ukulungisa kwakhona umnyango wedekhi xa kufuneka.
Ukufika kule veki kunye nemifanekiso ezayo- i-Wicker yangaphandle yokutyela iseti ehleli 5, itafile encinci yokutyela yangaphakathi ehlala 4, isitulo seofisi kunye ne-microwave.
4.92 · Izimvo eziyi-71
Ukukhululeka kweentshukumo zolwandle, umgama wokuhamba ukuya kwikhefi kunye neevenkile, i-Foursquare kunye nerestyu. 10 min ukuhamba ukuya kwiziko lotywala, i-5 min ukuhamba ukuya kwiklabhu yokusefa
Imizuzu eyi-15 uqhubela kwi-levin kwiivenkile ezinkulu kunye ne-Trig walk (kufuneka ukuba unayo ixesha!)
Imizuzu emi-5 uqhuba usuka kuhola wendlela 1
Imizuzu engama-45 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya sasePalmerston North kunye neSibhedlele
1hr 35mins ukuya eWellington
Ifumaneka nanini na ngokubhaliweyo okanye ngokufowuna kunye nomsingathi weyunithi kwindawo efumanekayo ixesha elininzi ukuba ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho.
Umsingathi uya kukubulisa ekuqaleni kokuhlala kwakho kwaye wonwabe kunxibelelwano oluninzi okanye oluncinci njengoko unqwenela, ubutyebi beengcebiso zasekhaya ukuba uyazifuna.